Shiinaha caag ah laba jibbaaran shaashadda qaab-dhismeedka iyo alaableyda | Zhongming
Qaab dhismeedka khaanadda laba jibbaaran
Hordhaca alaabtaShirkadeenu waxay soo saartay badeecad cusub, pp dhalada dhaadheer ee qaab dhismeedka isku dhafan, iyadoo la adeegsanayo polypropylene ahaan maadada salka u ah, muraayadda fiber galaaska ee qalabka la xoojiyay, iyo caaryada oo ku riixaysa qaabab. Nidaamka qaab-dhismeedka wuxuu ka kooban yahay 65 qaab-dhismeedka dhumucda caadiga ah iyo 65 aluminium qaab-qaabeysan. Waxaa loo isticmaali karaa isku xirnaanta isku xirnaanta kala duwan si looga hortago culeysyada dhismaha ee kala duwan.
Qiimo jaban iyo hawlgal fudud ayaa ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee pp qalabka isku dhafan ee dhalada dhaadheer. Qiimuhu waa 50% oo kaliya shaqada aluminium, culeysku waa kaliya 19kg /, cabirka caadiga ahna waa 1200x600mm, culeysku waa 14kg oo keliya, dhismuhu waa ku haboon yahay, kala-baxa iyo isku imaatinku waa deg deg, shaqaalaha iyo saacadana waa la badbaadayaa , dhismaha ayaa la fududeeyay, iyo xawaaraha dhismaha si wax ku ool ah loo hagaajiyay. Isla mar ahaantaana, pp qaab-dhismeedka isku-dhafan ee muraayadaha dhaadheer ee pp-ka ayaa u adkaysta aashitada, alkaliska iyo daxalka, fududahay in la nadiifiyo, adeegga muddada dheer, iyo dib-u-isticmaalka marar ka badan 60 jeer.
Maaddaama ay tahay wax soo saar fudud, ma jiro wax qashin ah oo ka baxa saddex qashin. Ka dib markii la gaaro nolosha adeegga, dib ayaa loo isticmaali karaa loona isticmaali karaa badeecad guddi deegaanka u roon. Foomka pp dhalada dhaadheer ee foomka dhismaha walxaha isku dhafan, oo leh faa'iidooyin xoog wanaagsan, kala-fududaan sahlan, caag wanaagsan, xawaaraha dhismaha oo dhaqso ah, keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka, ayaa daruuri noqon doonta in lagu sii dabaqo suuqa dhismaha casriga ah ee xoogga saaraya dhismaha cagaaran.
Cabbirka tiirarka: 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm
Waling kala duwanaansho la isku hagaajin karo: 200-600mm
Miisaanka khafiifka ah, waxtar leh. Gudiga ugu waaweyni waa 120x60cm, culeyskiisu waa 14kg oo keliya, kaasoo kor loo qaadi karo oo loo dejin karo hal qof oo keliya si fudud
Easy dhigay. Cabbirka kala duwan ee looxyada si adag ayaa loogu xirayaa biinanka. Xayndaabyada waxay leeyihiin feeraha dhabarka, taas oo ka dhigaysa nidaamka inuusan u baahnayn alwaax dhaqameed iyo musmaarro.Qafaaladu waxay leeyihiin xoojin biibiile laba jibbaaran, waxay dammaanad qaadayaan awoodda nidaamka oo dhan.
Awood sare. Waxyaabaha loo yaqaan 'modular formwork' waa PP (polypropylene) oo lagu dhejiyay fiilooyin quraarado qaas ah, laguna xoojiyay tuubbo bir ah oo lagu shubay balaastigga kaas oo awood u siinaya in albaabadu ay qabtaan cadaadis sarreeya Gacan-qabashada waxaa lagu sameeyaa biin bir ah, guddi kasta oo lagu xiro ugu yaraan 4 biin, taas oo ka dhigaysa nidaamka oo dhan mid xoog leh oo ku filan.
Waad shaqeyn kartaa bilaa darbi iyada oo loo maro usha xarkaha. Sababtoo ah waxaa lagu xoojiyay tuubooyin bir ah, oo si weyn u kordhiya xooggiisa. Marka lagu xoojiyo waling, way shaqeyn kartaa la'aanderbiga iyada oo loo maro xarig.
Fudud in lagu kala saaro shubka dhammaystiran. Sababtoo ah daaweynta dusha sare ee gaarka ah, shamiitadu kuma dhejiso qaab-dhismeedka, sidaas darteed baaruuddu uma baahna saliid kahor intaan la isticmaalin, waxaana lagu nadiifin karaa biyo fudud. Dusha sare ee derbiga oo ay dhiseen qaab-dhismeedkayagu waa mid siman, waa laga tagi karaa iyada oo aan dib-u-shaqeeyn
Dhismaha Foomka Aluminium
Nidaamka Foomka Aluminium
Nidaamka Shaqo ee Aluminium
Nidaamyada Qaab-dhismeedka Aluminium ee Qaaska ah
Qaab dhismeedka caaga ah ee Wall & Slab
Qaybo ka mid ah Isgoysyada Ringlock, Qaybta 'Ringlock Scaffolding Bracket', Kwikstage Qalabka Isboortiga, Iskeelka Iskeelka Isku-dhejiska ah ee Jack, Culus Waajibaadka Isku-dhafka Ringlock, Iskuxidhka Birta Cuplock,